Faha-58 taonan’ny fahaleovantena : Nosantarina omaly tetsy Antsonjombe ireo seho samihafa -
AccueilSongandinaFaha-58 taonan’ny fahaleovantena : Nosantarina omaly tetsy Antsonjombe ireo seho samihafa
04/06/2018 admintriatra Songandina 0
Raha vao miandoha ny volana jona, ny fankalazana ny fetim-pirenena no ao an-tsain’ny Malagasy. Homarihina ny 26 jona ny faha-58 niverenan’ny fahaleovantenan’i Madagasikara, ary tsy diso anjara amin’izany ny fanolorana hetsika sy hafaliana ho an’ny vahoaka. Nosantarina omaly tetsy Antsonjombe ireo hetsika ara-java-kanto samihafa ho fankalazana izany. Ireo mpanakanto sangany sy manana ny lazany amin’izao fotoana no nifandimby nanafana ny Coliseum tetsy Antsonjombe nanomboka ny mitataovovonana. « Podium goavambe » no anarana nisaloran’izany fampisehoana, ary nahitana ny fandraisan’anjaran-ndry Odyai, Tence Mena, Stéphanie ary Din Rotsaka. Honorat avy amin’ny tarika Fou Hehy kosa no niantsoroka ny fanentanana.
Ao anatin’izao volana jona izao, dia maro ireo hetsika mifandraika amin’ny fanehoana fitiavan-tanindrazana. Ankoatra ireo fampisehoana maimaimpoana isaka ny faritra samihafa dia anisan’ireo marihina ao anatin’ny volana jona ihany koa ny « Iray volan’ny teny malagasy ». Natokana ho volan’ny ankizy ihany koa toa ny isan-taona ny volana Jona. Manana anjara manokana amin’ny fankalazana ny fetim-pirenena ny ankizy noho izany. Fotoana ihany koa ny fankalazana ny 26 jona hanolorana kilalao ho an’ny ankizy. Misy ihany koa etsy ankilan’izay ireo hetsika samihafa entina manandratra ny maha-malagasy, ka anisan’izany ny fifaninanana Tsikonina, izay nentina hanentanana ireo ankizy amin’ny fanehoana ireo hay nahandro malagasy.